Koror dhimasho hal maalin gudaheed ah oo laga soo sheegayo dalka Talyaaniga – Geelle Magazine
Koror dhimasho hal maalin gudaheed ah oo laga soo sheegayo dalka Talyaaniga
Dalka Talyaaniga oo ah dalka labaad ee uu saameyn xooggan ku yeesho caabuqa corona, kadib Shiinaha, ayaa waxaa laga soo sheegayaa in marba marka kasii dambeyso ay sii kordheyso dadka u waxyoolabaya caabuqan.
Dhimashada uu cudurka Coronavirus sababay ee dalka Talyaaniga ayey hal maalin gudaheeda ku gaartay 475, waxayna ku dhawaatay 3,000 oo dhimasho – tiradaas oo ah tii ugu badneyd ee halmar sare u kacda tan iyo markii uu cudurkan dillaacay.
Kiisaska ilaa imimka Talyaaniga laga xaqiijiyay ayaa isku dar ahaan gaareysa 35,713 qof oo uu cudurkan ku dhacay, halka in ka badan 4,000 oo qofna ay ka bogsoodeen.
Lombardy, oo ah gobolka uu saameynta ugu ba’an ku yeeshay Caabuqan, ayaa waxaa laga soo tabiyay 319 dhimasho ruux oo hal maalin gudaheed ah.
Talyaaniga waa waddanka uu sida saa’idka u saameeyay cudurka saf-marka ah ee Corona, marka laga soo tago Shiinaha, oo ah halkii uu fayruskan kasoo billowday dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore ee 2019-kii..
Ugu yaraan 8,758 qof ayaa u dhimatay Fayraskan, kuwaasoo intooda badan ay ku geeriyoodeen gudaha Shiinaha.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in isku darka tirada guud ee uu ku dhacay cururka coronavirus caalamka oo dhan ay kor u dhaaftay 200,000.
80% kiisaskan ayaa laga soo tabiyay qaaradda Yurub iyo gobolka Galbeedka badweynta Pasifica, oo ay ka mid yihiin dalal badan oo reer Aasiya ah, sida ay sheegtay WHO.
Dalal badan ayaa tallaabooyin u qaaday sidii ay ku xakameyn lahaayeen cudurkan sii fidaya ee corona.
Waxyaabaha la sameeyay waxaa ka mid ah in la mamnuucay kulamada dad weynaha iyo safarrada.
“Laakiin in si dhab ah loo xakameeyo cudurkan saf-marka ah waxay ku xiran tahay in dalalku ay karantiilaan dadka, baaritaan joogto ahna sameeyaan, kuwa laga helana daweeyaan”, waxaa sidaasi yiri madaxa hay’adda caafimaadka aduunka ee WHO.
Dowladaha Somaaliya iyo Itoobiya oo Kawada Hadley Samaynta Corona Virus.